Golaha Wakiiladda Oo Ansixiyay Xeerka Tacadiyadda Ka Dhanka ah Haweenka | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Golaha Wakiiladda Oo Ansixiyay Xeerka Tacadiyadda Ka Dhanka ah Haweenka
Hargaysa (SDWO): Golaha Wakiiladda jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka kufsiga iyo ku xad-gudubka jinsiga, kaasoo golaha hor yaalay muddo saddex sanadood ah.
Fadhiga maanta oo uu shir-gudoominayay guddoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax, waxaa ka soo xaadiray 51 mudane oo ka mid ah 82-ka xubnood ee xildhibaanadda aqalkaasi ka kooban yahay.
Waxaana ogolaaday 46 mudane, 2 xildhibaan ayaa diiday, 2 mudane ayaana ka aamusay, gudoomiyuhu-na muu codaynin sidaas ayaanu ku ansaxay xeerka kufsiga iyo ku xad-gudubka jinsiga.
Baashe Maxamed Faarax, oo ka hor intii aan codka ansixinta loo qaadin xeerkani faahfaahin ka bixiyay ayaa sheegay in xeerkan laga saaray dhamaanba waxyaabihii loo arkay in ay ka hor imanayaan shareecadda islaamka iyo in marka la ansixiyo kadib aanay shaqayn doonin shuruucdii ka horeeyay.
Waxaanu yidhi “Mudaneyaal, waxaa ina hor yaalla xeerka kufsiga iyo ku xad-gudubka jinsiga, waana laga dooday, waxaanu ina hor yiilay ilaa 2014-kii. Xeerkan wixii shareecadda islaamka ka hor imanaya waa laga saaray, wixii ciqaab ahaa ee ka horeeyayna marka xeerkan la ansixiyo waa la joojinayaa, waxaana lagu dhaqmayaa xeerkan cusub”.
Tacadiyadda ugu badan ee la sheego in ay haweenka Somaliland la kulmaan waxaa ka mid ah kufsiga, guurka khasabka ah iyo falal kale oo lid ku ah xuquuqda bani’aadamka gaar ahaana dumarka.
Geesta kale ansixinta xeerkan waxaa soo dhaweeyay ururadda haweenka ee dalka ka jira sida NEGAAD iyo NOW oo ka mid ah daladaha ugu waa weyn ee ka shaqeeya arrimaha u doodidda iyo ilaalinta xuquuqda haweenka .
Waxaanay ku tilmaameen xeerkani in uu wax badan ka tari doono tacadiyo iyo dhibaatooyin ay sheegeen in ay haysteen ama la kulmi jireen haweenka Somaliland.
Dhinaca kale fadhigii maanta ayaa xildhibaanadda waxaa loo qaybiyay CV-yadda golaha wasiirrada cusub ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi, iyadoo guddoomiyaha goluhu mudaneyaasha ku wargeliyay in mid mid loogu yeedhi doono wasiirrada, isla markaana ay gudiyadda qaabilsan waraysiyo la yeelan doonaan.